Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-USA ezaphulayo » I-60% yabantu baseMelika ayinakwenzeka ukuba bahambe ngeeholide
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Ukubambisa • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Resorts • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
.60% of America akunakwenzeka ukuba bahambe ngeeholide.
Uphando lufumene ukuba i-29% yabantu baseMelika banokuthi bahambe nge-Thanksgiving kunye ne-33% banokuthi bahambe ngeKrisimesi-ukwanda ukusuka kwi-21% kunye ne-24%, ngokulandelelana, xa kuthelekiswa no-2020. Abo baceba ukuhamba ngeeholide balindele ukuba qhuba, kodwa ukunyuka kwamaxabiso erhasi kunokuthoba ezo zicwangciso.
Umntu omnye kwabathathu baseMelika uceba ukuhamba ngeKrisimesi, kwaye bambalwa abaceba ukuhamba ngeThanksgiving.
I-68% yabahambi be-Thanksgiving baceba ukuhlala nosapho okanye abahlobo, ngelixa i-22% iceba ukuhlala ehotele.
I-66% yabahambi beKrisimesi baceba ukuhlala nosapho okanye abahlobo, ngelixa i-23% iceba ukuhlala ehotele.
Ngelixa ukunyuka kwamazinga okugonya ngokuchasene ne-COVID-19 enyuse amanqanaba okuthuthuzela abahambi, uninzi lwabantu baseMelika basakhetha ukuhlala ekhaya ngeli xesha leeholide, ngokutsho kovavanyo olutsha lwesizwe olugunyaziswe ngabakhenkethi. Umbutho weAmerican Hotel & Lodging Association (AHLA).
Uphando lufumene ukuba i-29% yabantu baseMelika inokwenzeka ukuba hamba ngenxa ye-Thanksgiving kunye ne-33% kunokwenzeka ukuba bahambe ngeKrisimesi-ukunyuka ukusuka kwi-21% kunye ne-24%, ngokulandelanayo, xa kuthelekiswa ne-2020. Abo baceba ukuhamba ngeeholide balindele ukuqhuba, kodwa ukunyuka kwamaxabiso erhasi kunokuthoba ezo zicwangciso.
Uvavanyo lwabantu abadala be-2,200 lwenziwa nge-30 ka-Okthobha - ngoNovemba 1, 2021, yiMorning Consult egameni le I-AHLA. Iziphumo eziphambili ziquka oku kulandelayo:
Umntu omnye kwabathathu baseMelika uceba ukuhamba ngeKrisimesi (33% kunokwenzeka ukuba ahambe, i-59% ayinakwenzeka), kwaye isicwangciso esincinci sokuhamba nge-Thanksgiving (29% kunokwenzeka, i-61% ayinakwenzeka).
I-52% yabantu baseMelika bathi baceba ukuthatha iihambo ezimbalwa kwaye i-53% iceba ukuthatha uhambo olufutshane ngenxa yokunyuka kwamaxabiso egesi.
Abahambi bolonwabo benza uhlengahlengiso oluninzi kwizicwangciso zabo zokuhamba ngokusekwe kwimeko yangoku yobhubhane, kubandakanya ukuhamba kuphela kumgama wokuqhuba (58%), ukuthatha uhambo olumbalwa (48%), kunye nokuthatha uhambo olufutshane (46%).
Phakathi kwabazali abanabantwana abaneminyaka engaphantsi kwe-12, i-41% ithi ukufumaneka kwezitofu zokugonya kubantwana abaneminyaka eyi-5-11 kuya kubenza bakwazi ukuhamba.
I-68% yabahambi be-Thanksgiving kunye ne-64% yabahambi beKrisimesi baceba ukuqhuba, xa kuthelekiswa ne-11% kunye ne-14%, ngokulandelanayo, abaceba ukundiza.
Ngelixa izitofu zokugonya ziye zanceda abahambi ukuba bazive bekhululekile, ukunyuka kwamaxabiso erhasi kunye neenkxalabo eziqhubekayo malunga nobhubhane kwenza abantu abaninzi baseMelika bathandabuze ukuhamba ngexesha leholide. Ngaphandle kokunyuka okuncinci okulindelweyo kuhambo lweholide kulo nyaka, iihotele ziya kuqhubeka nokujongana nokudodobala kwezoqoqosho kulo bhubhani, igxininisa imfuneko yoncedo ekujoliswe kulo, njengoMthetho weMisebenzi yeHotele, ukuxhasa ishishini kunye nabasebenzi balo de uhambo lubuye ngokupheleleyo.
Ngaphandle kokuba phakathi kwezona zinto zinzima, iihotele lelona candelo leshishini lokubuka iindwendwe kunye nelokuzonwabisa liza kufumana isiqabu sobhubhane kwiCongress.